Dowlada Puntland ayaa shaacisay magaca wiilkii la sheegay inuu dilay Allaha u naxariistee Shiikh Cabdulqaadir Nuur Farax oo shalay lagu dilay Masaajid ku yaal magaalada Garowe xili uu tukanayey salaadii Casar.
Cabdiraxmaan Xussen Jaamac Bile ayaa la sheegay in la yiraaho ninka dilkan geystay oo ay soo qabteen shacabkii salaada ku tukanayey Masaajidka Bedar ee ku yaal xaafada Hodan ee magaalada Garowe.
Ninkan ayaa la sheegay inuu gudaha ugu soo galay masaajidka isagoo wata Bistoolad isla markaana toogtay Shiikh Cabdulqaadir Nuur Faarax xili uu ku jiray rakacadii 3aad ee salaada Casar. AUN Shiikh Cabdulqaadir ayaa ku tukanayey safka labaad ee masaajidka.
Ninkan ayaa kadib halkaasi isku dayey inuu ka baxsado waxaana daba galay dadkii masaajidka ku takanayey iyo waliba mid kamid ah wiilasha uu dhalay Shiikh Cabdulqaadir oo goobta ku sugnaa.
Shacabka Xaafada Hodan oo ka qeyb qaatay soo qabashada ninkan oo ku hubeysnaa ayaa waxaa dhaawac kasoo gaaray afar qof oo ay ku jirto hal gabadh.
Mid kamid ah wiilasha ku dhaawacmay soo qabashada gacan-kudhiiglaha ayaa xaaladiisa aad u liidataa waxaana lagu hayaa isbitaalka magaalada Garowe.
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo xalay ka hadlay dilka Shiikh Cabdulqaadir Nuur Faarax allaha u naxariistee ayaa sheegay in ninka dilka geystay uu yahay kan lasoo qabtay, isla markaana loo hayo markhaatiyaal aad u badan.
Dowlada Puntland ayaa si rasmi ah u sheegtay in dilka ay ka danbeeyaan kooxda Al Shabaab